Ọrụ Azerbaijan gụnyere ihe oyiyi ọla nke President na nwunye nwunye.
Ochichi nke Saudi Arabia
Ọchịchị gọọmentị Saudi Arabia nwere ihe osise ọla abụọ, nke bụ nnukwu square rilievo (50 mita ogologo) na Sand Dunes (20 mita ogologo). Ugbu a, ha na-eguzo na Riyadh ma gosipụta ùgwù nke ọchịchị na ịdị n'otu nke ndị Saudi.
Anyị na-ebupụ otu ihe osise ọla edo maka United Kingdom na 2008, nke e mere gburugburu ọdịnaya nke ịnyịnya na-ejikọ, na-agbaze, na-azụ ihe na ịnyịnya ịnyịnya maka eze. Ejiri oru ngo a na Britain Square ma gosiputa amara ya na uwa ugbu a. Wha ...
Anyị mepụtara otu ihe osise ọla nchara maka Kazakhstan na 2008, gụnyere mkpụrụ isii nke 6m-elu General On Horseback, 1 ibe nke 4m-elu Emperor, 1 ibe nke 6m-elu Giant Ugo, 1 mpempe 5m-elu Logo, 4 iberibe 4m-elu Horse, 4 iberibe 5m-ogologo mgbada, na 1 mpempe nke 30m-long Relievo expre ...